Too'annaa Sagantaa Raawwii
Himoonni armaan gadii sagantaa rawwii too'atu.
sagantaan waliigalatti lakkaddaa sarara jalqabaa irraa hanga lakkadda sarara xumuraatti raawwata. Itti dabaltees adeemsa murtaa'e kan sagantaa keessaa akkaataa adeemsa xixiqqaa ykn faankishiniitti raawwachuu dandeessa. Qaama sagantaa amma barbaachisu irra deddeebi'uuf marsaa fayyadamuu dandeessa,ykn hanga haalli ta'e murtaa'utti. Gosti too'annaa himoota akkanaa haala, marsaa, ykn utaalchoo himootatti qoodamu.
Himoonni armaan gadii haala irratti hundaa'u.
Himoonni armaan gadii marsoota raawwatu.
Title is: Too'annaa Sagantaa Raawwii